FIRENENA SY FIANGONANA ARY FANJAKANA MANKATOA AN’ I JESOSY KRISTY TOMPO NO SITRAPON’ANDRIAMANITRA HO AN’ I MADAGASIKARA - GFFM
Ny rafitra repoblikana, laika, demokratika, napetraky ny mpanjanantany frantsay, dia nitondra ozona ho an’ ny firenena, nentina nanapotehina ny kolotsaina sy ny soatoavina malagasy, nandrobana ny harem-pirenena ary nampahantra ny valo-polo isan-jato (80%) an’ ny vahoaka malagasy.
Tany Masina i Madagasikara, ilay Tany Edena fahiny. Ary efa nohamasin’ i Jesosy Kristy, ho an’Ilay Mpahary, efa 2000 taona lasa izay i Madagasikara. Ary araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra dia hiposaka eto Madagasikara ny Fahazavan’Andriamanitra ary hipaka hatrany amin’ny faran’ ny tany (Isaiah 60).
Araka ny Tenin’Andriamanitra dia Jesosy Kristy no Mpanjakan’ ny Mpanjaka sy Tompon’ ny tompo, manerana ny Lanitra sy ny Tany (Apokalypsy 19:16). Ary Fiangonana sy Firenena ary Fanjakana mankatoa an’Andriamanitra Andriananahary sy mankatoa an’ I Jesosy Kristy, Mpanjakan’ ny mpanjaka sy Tompon’ ny tompo, no Sitrapon’Andriamanitra ho an’ ny firenena rehetra, ary indrindra ho an’ ity Nosy Masina ity. “AHY I MADAGASIKARA”, hoy Jesosy Kristy Tompo.
2. NY TENIN’ANDRIAMANITRA NO FOTOTRY NY FANJAKAN’I MADAGASIKARA:
LALAM-PANORENANA MIFOTOTRA amin’ ny BAIBOLY, TENIN’ANDRIAMANITRA no SiTRAPON’ANDRIAMANITRA ho an’ ny firenena rehetra, ary indrindra koa ho an’ I MADAGASIKARA. Ary araka ny Tantara, izay nohamarinina mpanompon’Andriamanitra, dia ETO MADAGASIKARA NY DIDY FOLO, nosoratan’Ilay Mpahary (Deot. 5:6-18), ao anatin’ Ilay FIARAN’ NY FANEKENA, tao amin’ ny Toerana Masina Indrindra tao anatin’ ny Tempoly Voalohany tao Jerosalema!
Fa ny rafitra repoblikana, laika, demokratika, dia rafitra vahiny tandrefana, nataon’ olona nanompo sampy, nitsipaka an’ Ilay Mpahary, ary napetraky ny mpanjanantany teto Madagasikara mba hanohizana ny fanjanahantany amin’ ny endriny vaovao, hanapotehana ny soatoavina sy ny kolotsainam-pirenena sy hampiadiana ny samy mpiray tanindrazana ary hangalàrana ny harem-pirenena.
3. TENY FIKASAN’ANDRIAMANITRA NY FANJAKA-MPISORONA SY FIRENENA MASINA:
Teny Fikasan’Andriamanitra ny Fanjakam-Pisorona sy ny Firenena Masina (Eksodosy 19:6), ho hajoron’Ilay Mpahary tsy ho ela intsony, izay Fanjakana miori-paka sy manaja ny Baiboly Tenin’Andriamanitra. Hisy ny MPANJAKA HITONDRA FITAHINA araka ny Teny Fikasan’Ilay Mpahary (Genesisy 12:2-3 sy 17:6), manaiky sy manaraka ary mifikitra amin’ i Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy (Asa 5 :31), ary hisy FILAN-KEVITRY NY MPISORONA (I Tantara 24 :7-19) eo anilany, izay mivavaka hatrany (I Petera 2 :5) sy manoro làlana ary manitsy ny Mpitondra Fanjakana araka ny Baiboly Tenin’Andriamanitra (Salamo 119 :105).
Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra, hajorony eto tsy ho ela intsony ny FANJAKAN’ I MADAGASIKARA, Fanjakam-Pisorona sy Firenena Masina (I Petera 2: 9-10), hitondra Fitahiana ho an’ ny firenena. Efa nohamarininy izany Fanjaka-Mpisorona izany tamin’ ny 02 Aogositra 1983 tany Ankaramalaza.
Ary hajoron’ Andriamanitra eto Madagasikara ny Sivilizasiona Vaovao, ny Rafi-piaraha-monina Vaovao, ny Olom-Baovao, manaja an’ i Zanahary sy mankatoa an’ i Jesosy Kristy Tompo, ary ho lasa FIRENENA VOALOHANY ERAN-TANY I MADAGASIKARA !
Ary farany, hoy Andriamanitra: « Dia hataon’i YHWH ho LOHANY IANAO, fa tsy ho rambony; ary HO AMBONY TOKOA IANAO, fa tsy ho ambany, RAHA MIHAINO NY DIDIN’ YHWH ANDRIAMANITRAO, izay andidiako anao anio, KA MITANDRINA SY MANARAKA AZY » (Detoronomia 28:13)!
Hajoron’Andriamanitra tsy ho ela intsony eto ny Fanjakan’i Madagasikara, Fanjakam-Pisorona sy Firenena Masina! Miomana ny Fiangonana! Miomana ny Firenena! Hiposaka eto Madagasikara ny Fahazavan’Ilay Mpahary, ao amin’ i Jesosy Kristy Tompo, ary hipaka hatrany amin’ ny faran’ ny tany! Tenin’Andriamanitra no arahina fa tsy ny tenin’ ny mpanao politika. Fanjakana fa tsy repoblika. Tsy ny fitondrana jadona na ny demokrasia, fa Fanjaka-Mpisorona mankatoa an’i Jesosy Kristy, Mpanjakan’ ny Mpanjaka sy Tompon’ ny tompo.